Social Media + Nchịkọta = Emeghị Emezi | Martech Zone
Ọ bụrụ na m ga-ajụ gị isi mmalite nyere ndị ọzọ okporo ụzọ gị na saịtị, Twitter ma ọ bụ Facebook… kedu ka ị ga-esi chọpụta nke ahụ? Imirikiti web nchịkọta ndị ọrụ ga-abanye wee lelee isi mmalite ha wee wepụta uru ahụ. Nke ahụ bụ nsogbu.
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-agbakwunye "twitter.com" dị ka isi mmalite na-eche na ọ na-eme aghụghọ. Ọ bụghị ikpe. Ọnụ ọgụgụ ndị na-ezo aka na ndị ọbịa si twitter.com bụ naanị ndị mmadụ pịrị na njikọ sitere na ibe weebụ twitter.com mepere emepe ma mee ya na ibe gị. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị m, lelee akụkụ nke dị n'okpuru hootsuite.com na site Twitter.com:
Ọbụlagodi naHootsuite, ị na-ahụ na-ezo aka na saịtị…. ma ọ bụ ị na-eme? Ọfọn, ọ bụrụ na m na-tinye n'ọrụ naHootsuite ngwa na Droid ma ọ bụ iPhone m, anaghị m ahụHootsuite dị ka saịtị na-ezo aka! N'ezie, njikọ ọ bụla sitere na ngwa a na-achọpụta dị ka okporo ụzọ na-enweghị onye na-ezo aka.
Ouch. Ma ọ na-akawanye njọ.
Ngwa na-achịkwa twitterverse ma na-amalite ịpụta na Facebook, kwa. Dịka anyị niile na-agagharị na mkpanaka, anyị niile na-eji ngwa mkpanaka na ijikọ. Ana m eji Adium akpa nkata na Facebook… yabụ oge obula m pịa njikọ nke enyi Facebook zitere m, a naghị akpọ Facebook okporo ụzọ. Ọ na-egosi dị ka a nleta na-enweghị onye na-ezo aka.
N'ihi ya, ụlọ ọrụ na-elelị mgbasa ozi mgbasa ozi ha site n'ịdabere na ezughị ezu nchịkọta. Ebe ọ bụ na imirikiti ụwa n'ịntanetị na-eji Google, ọ gaghị adị mma. O doro anya na Google ga-ewu ihe nchịkọta ọnụ ụzọ ndị enyi ya Facebook or Twitter. Yabụ kedu ụlọ ọrụ ịme?
Nke mbu, ị nwere ike ịchọrọ itinye ego na ndị ọzọ nchịkọta ngwá ọrụ. My ahịa na ndị enyi na Webtrends na-arụ ọrụ na a mmekorita ya na bit.ly… a aga na m nwere obi ike ga-ịma jijiji na nchịkọta ụwa.
N’enyeghi ego ohuru nchịkọta n'elu ikpo okwu, a ka nwere ihe ị ga - eme.
Nke mbụ bụ iji bọtịnụ gọọmentị Twitter na saịtị gị. Enwere ike ịde bọtịnụ ahụ iji tinye koodu mkpọsa ga-esochi ọbịbịa gị na bọtịnụ gị… wee ga-adị mkpụmkpụ iji ndị ọzọ dị ka bit.ly. Aga m akwado bit.ly si pro ọrụ iji hazie ma jiri URL gị dị mkpụmkpụ. Ọ bụrụ na ịme nke a, ndị mmadụ agaghị enwe ike idetuo na mado URL ahụ wee belata ya n'onwe ha.
Nke abụọ bụ ịgbakwunye mkpọsa mkpọsa gị querystring na URL tupu ị belata ya. Nke a ga - enyere gị aka ịdebanye Twitter dị ka isi iyi na mkpọsa ma nwee ike ịnye gị usoro ziri ezi nke okporo ụzọ niile a na-agwa gị.
Ọ bụrụ na ị gbanye ndepụta blog gị na Twitter na-eji ngwá ọrụ dị ka Ikwusa ozi, ị nwere ike ịgbakwunye koodu mkpọsa Google Analytics ma belata ya na akaụntụ bit.ly gị na akpaghị aka. Nke a enweghị ajụjụ na ndị ọbịa ahụ si n'aka gị na-agbanye nri gị site na Twitterfeed.
Agbalịbeghị mbanye anataghị ikike Facebook dị ka koodu bọtịnụ iji gbakwunye na querystring… Amaghị m na ọ ga-enwe ike n'oge a, mana ọ ga-ekwe omume. Ọ nwere ike ịdaba na nsogbu ebe ị nwere URL abụọ dị iche iche a gụrụ dịka ọ masịrị, ọ bụ ezie na… otu nwere koodu mkpọsa na otu enweghị.
Isi okwu bụ na saịtị gị nwere ike ịhụ ọtụtụ okporo ụzọ karịa ka ị chere site na isi mmalite mgbasa ozi. Ngwa ngwa ngwa na ngwa desktọọpụ na-agbanwe ụkpụrụ nke nleta ndị ahụ ma ọ ga-ewe ọrụ ọzọ iji nyere aka chọpụta ebe ndị ọbịa ahụ na-abịa. Ruo mgbe anyị ga-ahụ ụfọdụ mmetụ dị ịrịba ama na nchịkọta, ị ga-elebara anya na nkeiche a.
Tags: Analyticsọjọọ n'ihekpọmkwem okporo ụzọụzọ ntinye akamgbasa ozi mgbasa ozinsogbu mgbasa ozi mmekọrịtaelekọta mmadụ Ntuziaka okporo ụzọtwitter na-ekwu banyere njikọ
Ọkt 4, 2010 na 9:35 AM
Doug, post dị egwu - nke a bụ nsogbu m na-achọpụta na nso nso a. Ị kwuru na ị nwere ike tinye koodu nsochi GA site na iji TwitterFeed mana enweghị m ike ịhụ ebe nhọrọ ahụ dị ...
Jenụwarị 6, 2011, elekere 2:07 nke abalị
Doug, enweghị m ike ikweta na ọ nweghị onye kwuru banyere nke a. Ana m ede akwụkwọ ozi yiri nke ahụ ugbu a, echetara m na achọrọ m ịkọwa nke a. Daalụ maka akụkọ. M ga-ejide n'aka na m ga-ejikọta azụ na ya site na post m.
O juru m anya na o nweghi onye kwuru okwu na nnukwu post a. M na-arụ ọrụ maka mmalite (http://www.growsocially.com) ma anyị na-agbalị idozi nsogbu a.